Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dib Ugu Laabtay Muqdisho Kadib Markii Kiinya Ka Cudurdaaratay Inay Qaabisho Iyo Guddigii Maamul u Sameynta Jubbooyinka oo Muddo Qabsaday | Somali - Diaspora
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dib Ugu Laabtay Muqdisho Kadib Markii Kiinya Ka Cudurdaaratay Inay Qaabisho Iyo Guddigii Maamul u Sameynta Jubbooyinka oo Muddo Qabsaday
Nairobi (Moment Media Group) Madaxweynaha dawlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayey oo ku sugnaa wadanka Itoobiya ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib markii la baajiyey socdaal uu maanta madaxweynuhu ku iman lahaa wadanka Kiinya.
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo toddobaadkii hore booqasho ku tagtay magaalada Nairobi ayaa sheegtay in warqad martiqaad rasmi ah ay ka heshay dawlada Kiinyataasoo madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku booqano wadanka Kiinya si uu kulan ula yeesho dhigiisa wadanka Kiinya Mwai Kibaki. Halkaas ka Akhri http://observermoment.wordpress.com/2012/11/30/raiisal-wasaare-ku-xigeenka-soomaaliya-oo-kulan-la-qaadatay-madaxda-waddanka-kenya/
Martiqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa rasmi ahaan u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda Kiinya Sam Ongeri oo maalinimadii Talaadada kulan la qaatay Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan. Kulankaasi waxaa kaloo looga dhawaaqay in labada dawladood ay ku heshiisyeen inay hagaajiyaan xiriirkooda dhanka diblomaasiyadda iyo amniga oo waayadanba aan fiicneyn.
Sida qorshuhu ahaa maanta oo Jimce ah ayaa lagu waday in madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisii joogay Addis Ababa ay ka degaan Nairobi, hase yeeshee waxaa laga warheley in wafdigii uu ka degey Muqdisho.
Haddaba maxaa iska bedelay booqashadii madaxweynaha ee Kiinya?
Ilo wareed ku dhow Villa Soomaaliya ayaa Moment Media u sheegay in saaka markii wafdiga madaxweynuhu isu diyaariyeen inay u duulaan Nairobi lagu soo wargeliyey in dawlada Kiinya aaney diyaar u ahayn qaabilaada madaxweynaha Soomaaliya, sababo lagu tilmaamay dhanka farsamada darteed sidaasi awgeedna waxaa qoraal la soo marsiiyey safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa lagu soo wargeliyey in dib loogu dhigo booqashada madaxweynaha Xasan DSheekh Maxamuud ee Kiinya.
Ma jirin wax mudo ah oo loo cayimay, waxaana wafdigii madaxweynaha ee joogay Addis Ababa ay isla markiiba dalbadeen diyaarad u qaada Muqdisho iyagoo gebi ahaanba bedelay khadkii socdaalkooda oo markii hore ku jiheysnaa Nairobi.
Wararka aan ka heleyno ilo wareedka ayaa intaa ku daray in sababta Kiinya ay uga laabatay qaabilaada madaxweynaha ee ay u horey u ballanqaaday ay tahay khilaaf soo cusboonaaday oo ka dhex oogmay guddiga farsamo ee diyaarinta maamul u sameynta Jubbooyinka oo taageero ka helaya Urur Goboleedka IGAD iyo madaxtooyada Soomaaliya. Guddigaasi ayaa toddobaadkan sheegay inay dhameeyeen maamul dhisidii Jubbooyinka taasoo qeyb ka mid ah IGAD ay taageertay.
Taageerada IGAD ay siiyeen guddiga maamul u sameynta Jubbooyinka ayaa waxaa sii xoojiyey kadib markii 27-kii bishan oo ku beegneyd Talaadadii magaalada Kismaayo ay booqdeen wafdi ka socday IGADoo qeyb ka ah hawlaha maamul dhisida Jubbooyinka kuwaasoo la kulmay xubno uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Yuusuf Aw-Liibaax oo Kismaayo ku sugan.
Waxaa ilo wareedku u xaqiijiyey Moment Media in guddiga farsamada ee diyaarinta maamulka gobollada Jubbooyinka oo hadda ku kulansan Nairobi (oo la rabay in madaxweynuhu isku arkaan Nairobi) ay sheegteen inaanay hadda diyaar u ahayn hor fariisiga madaxweynaha iyo wafdigiisa booqashada ku imaanaya Nairobi.
Xubnaha guddiga ayaa dawlada Kiinya u sheegay in mudo toban maalmood ah ay u baahan yihiin si ay u diyaarsadaan qorshayaasha ka dhiman habka maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka kaasoo mudooyinkanba laga waday dalka Kiinya.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaan ku faraxsaneyn qaabka ay u shaqeynayaan guddiga farsamada ee maamul u sameyna Jubbooyinka, kaasoo caadi ahaan dawladu ay u aragto guddi aan metelin dada deegaanka isla markaana ay gadaal ka riixeyso dawlada Kiinya, waxaana dhanka kale ay dawladu waday qorshe kulamada Nairobi hadda ka socda loogu soo wareejinayo gudaha dalka.
Isagoo ku sugnaa magaalada Addis Ababa, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shir jaraa’id oo ay Arbacadii wada qabteen raysul wasaaraha Itoobiya wuxuu si cad u sheegay in dawlada ay ka masuul tahay maamul u sameynta gobollada dalka, lana diyaarinayo nidaamkii federaalka ee dalka lagu dhaqi lahaa.
Wasaaradda Arimaha Gudaha oo shir furtay
Dhanka kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ka bilawday kulan socon doona muddo saddex cisho ah kaasoo looga hadlayo arrimaha gobollada Jubbooyinka. Waxaa kulankan ka qeybgalaya wakiilo ka socda beelaha dega gobollada Jubbooyinka kuwaasoo wasaaradda arrimaha gudaha ay martiqaaday.
Mid ka mid ah ka qeybgalayaasha shirka oo aan rabin in magaciisa la xigto maadaama uusan saxaafadda la hadalkeeda u fasax qabin, ayaa Moment Media Group u sheegay in kulankan oo ah wadatashi ay ka qeybgalayaan odayaal, dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beelaha dega gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo oo ah saddexda gobol ee maamulka loo dhisi doono.
Maxaa ka soo baxay Kulankii Waftigii Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Ra’iisul wasaaraha Itoobiya DOOD FURAN: Dawlada Soomaaliya oo Rabta In Laga Qaado Cunaqabateynta Hubka